Saddex nooc oo nalal ah si ay u iftiimiyaan qolkaaga qadada | Bezzia
Saddex nooc oo nalal ah si ay u iftiimiyaan qolkaaga cuntada
Maria vazquez | 09/05/2022 20:00 | Qurxinta qurxinta
Miyaadan garanayn sida loo iftiimiyo qolkaaga cuntada? Waxaa jira noocyo badan oo nalal ah oo aad isticmaali karto si aad iftiin toos ah ugu bixiso miiska cuntada sababtaas awgeed go'aan qaadashada waxay noqon kartaa mid culus. Si aan kuugu fududeyno, Bezzia waxaan maanta kula wadaageynaa saddex nooc oo nalal ah oo aadan ku khaldami karin.
Waxaa jira saddex nooc oo nalalka saqafka ah si ay u iftiimiyaan qolkaaga qadada kuwaas oo ay adag tahay in aan si sax ah loo helin dhamaantoodna waxay wadaagaan hal sifo: waa pendants. Doorashada mid ama mid kale waxay ku xirnaan doontaa qaabka aad raadineyso si aad u qurxiso meel qoyska ah sida qolka cuntada.
Waa maxay sababta laalaabka? Sababtoo ah waxaan raadineynaa inaan iftiinka u soo dhaweyno miiska si uu u iftiimiyo. Waa utopian in laga fikiro in guryaha intooda badan ay awoodi doonaan in ay laadlaan sida sawirada aan ku tusinno. Badideen ma haysanno saqafyo dhaadheer oo sidan u sarreeya. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la ixtiraamo fogaan gaar ah oo miiska ilaa nalka si aysan u faragelin sida ay noogu muuqato in ay ku dhici doonto sawirka saddexaad.
1 laambad gacmaha leh
2 Laambadihii laambadaha wax-soo-saarka ee warshadaha
3 Laydh dabiici ah oo weyn
laambad gacmaha leh
La nalalka gacmaha badan Waxay yihiin beddel weyn oo iftiiminaya qolka cuntada. Caadi ahaan kuwani waxay ka samaysan yihiin dhidib dhexe oo ay gacmuhu u kala baxaan jihooyin kala duwan si aan gees ka mid ah miiska u ifin.
Waxay yihiin laambado leh shakhsiyad badan waxayna ku habboon yihiin in la gaaro isku-dhafka habboon ee qolka cuntada ee u dhexeeya iftiinka guud iyo iftiinka focal. Kuwaas oo leh gacmo qeexan Waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad iftiimiso alaabta guriga sida armaajooyinka.
Bezzia waxaan u aragnaa inay yihiin soo jeedin cajiib ah oo lagu qurxiyo dhammaan noocyada qolalka cuntada. Waana taas noocyo badan oo laambado ah Noocan ah ayaa suurtogal ka dhigaya in la waafajiyo meelo aad u kala duwan. Waxaad ka heli doontaa iyaga oo leh muraayado dhar ah, oo ku habboon in lagu daro taabasho dhaqameed qolka cuntada; oo leh tulips dhalada ah si ay u siiso qaab caadi ah; midkood qaabka buufinta si loo gaaro deegaan hadda jira oo casri ah.
Laambadihii laambadaha wax-soo-saarka ee warshadaha
Tan iyo markii laambadihii laambadihii u ekaa warshadaha ay dib u soo noqdeen magacooda adduunka qurxinta, waxay sii wadeen inay noqdaan beddel aad u wanaagsan oo iftiiminaya jasiiradda jikada iyo miiska qolka cuntada labadaba. Meelahaasna waa inaysan daruuri u yeelanin qaab warshadeed.
Inkasta oo cabbirkooda weyn awgeed ay suurtogal tahay in la isticmaalo mid ka mid ah nalalkan si loo iftiimiyo qolka cuntada, marar dhif ah ayaa la helaa kaligood. The kooxaha laba ama saddex laambadood Waxay ku badan yihiin miisaska leydiga ah waxayna sidoo kale leeyihiin awood qurxin badan.
Laambadahan waxaa badanaa lagu soo bandhigaa macdan ama matte dhammayn. Midabada dambe ee midabada sida madow, cawl ama midab dhagax ah ayaa hadda ah kuwa ugu caansan ee qurxinta qolalka rustic iyo kuwa casriga ah labadaba.
Laydh dabiici ah oo weyn
Qalabka dabiiciga ahi had iyo jeer waxay ku daraan diirimaad guryaheena. fiilooyinka dhirta Waxay sidoo kale hadda yihiin isbeddel ku yimaada naqshadeynta gudaha, markaa maxaad ugu dari weyday naqshadeynta qolka cuntada? Waxaan ku samayn karnaa iyada oo loo marayo kuraasta, laakiin sidoo kale innagoo saarayna nal dhexe oo weyn miiska. Miyaanad u malayn inay si gaar ah ugu muuqdaan miisaska wareegsan ama leydiga ah?
Laambadahani maaha oo kaliya inay bixiyaan iftiin aad u diiran qolka laakiin sidoo kale waxay u muuqdaan inay ka tarjumayaan mahadnaqa naqshadooda tidcan. qaababka fiican ee derbiga. Saqafkaagu ma sarreeyaa? Ku dhiiran laambad nooca gambaleelka ah. Haddii, dhinaca kale, saqafka uusan si gaar ah u sarreyn, dooro naqshad wareegsan oo siman.
Kuwani waa saddex ka mid ah noocyada badan ee nalalka aad isticmaali karto si aad u iftiimiso qolkaaga qadada. Dhammaan waa la hagaajin karaa, iyadoo la dooranayo naqshadda saxda ah, qolkaaga cuntada, laakiin kaliya adiga ayaa go'aamin kara midka la dooran doono. Qiimaynta qaabka miiska iyo cabbirkiisa, iyo sidoo kale qaabka qolka, waxaan hubnaa inaad ogaan doonto dooro midka saxda ah. Horta midkee ayaad jeceshahay? Midkee ayaad jeceshahay inaad ku qurxiso qolkaaga qadada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Qurxinta qurxinta » Saddex nooc oo nalal ah si ay u iftiimiyaan qolkaaga cuntada
Ma jiraan rag ay lamaanahooda ku xad gudbeen?